Google Primer: Mụta Azụmaahịa Ọhụrụ na Nzụta Azụmaahịa Dijitalụ | Martech Zone
Ndị ọchụnta ego na ndị na-ere ahịa na-ejupụtakarị ma a bịara ya digital marketing. E nwere ihe a mindset na m inupụ folks ịmụta dị ka ha na-eche banyere ahịa na ahịa online:
Ọ na-agbanwe mgbe niile - nyiwe ọ bụla na - agabiga oke mgbanwe ugbu a - ọgụgụ isi, mmụta igwe, nhazi asụsụ, eziokwu mebere, eziokwu agwakọta, nnukwu data, ngọngọ, bọọlụ, ntanetị nke ihe… yeesh. Ọ bụ ezie na nke ahụ na-atụ egwu, buru n'uche na nke ahụ bụ uru ụlọ ọrụ anyị. Nchekwa ndị ahịa na nzuzo ga-akawanye mma, yana ọwa na atụmatụ anyị nwere ike idokwa iji rute ha mgbe ha na-achọ ngwaahịa na ọrụ anyị.
Nabata n'oge na-aba uru - agbanyeghị na ọ dị ntakịrị, ọwa ahịa ahịa dijitalụ ọhụụ na-enye ohere dị egwu ịpụnara ndị na-ege gị ntị ndị asọmpi gị anaghị efe. Ihe egwu dị, n'ezie, bụ na enwere ike imechi onye na-ajụ ase ka ọ daa ma ọ bụ nweta ya. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịnwere ike imetụta ndị na-ege gị ntị na ịlaghachi ha na saịtị gị ebe ịnwere ike ijide ozi-e ma ọ bụ tinye ha na mkpọsa na-azụlite, mgbe ahụ ị ga-ahụ ụfọdụ ihe ịga nke ọma.
Mee ihe na-arụ ọrụ - arịọla mgbaghara maka enweghị ike ime ya niile. O siri ike na ị ga-ahụ azụmaahịa nke na-eji usoro na ọwa niile. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ịchọta azụmahịa nke gụrụ ha niile ma jiri ha niile rụọ ọrụ nke ọma. Ọ bụrụ na ị na-enweta nsonaazụ site na email, jiri email. Ọ bụrụ na ị na-anyagharị nsonaazụ na mgbasa ozi mmekọrịta, jiri mgbasa ozi mmekọrịta. Mee ihe na - arụ ọrụ - nwalee ma tinye ndị ọzọ na - ajụ ase ka ị na - akpaghị aka ma wuo arụmọrụ n'ime.
Ndị mmadụ na-ajụ m otu m si agbaso up Anaghị m. Ozugbo m na-eri ihe ọmụma ma kuziere onwe m, nyiwe ọhụụ na-apụta kwa ụbọchị. Ọ bụ otu n'ime ihe mere m ji akwalite ndị isi ndị ọzọ na ụlọ ọrụ teknụzụ ahịa. Kpokọta saịtị anyị niile ọnụ, ị ka ga-amụta ntakịrị ihe na-eme na ụlọ ọrụ anyị.
Ebee ka m ga-amalite?
Nke ahụ bụ ajụjụ nde dollar na obodo anyị. Ebe ka mmadu si amalite? Nke a bụ otu ndụmọdụ maka gị - Ihe Nlekọta Google.
Ngwa Primer na-ewepụta ngwa ngwa, oke ruru, nkuzi na-enweghị jargon na isiokwu azụmaahịa na azụmaahịa. A haziri ya maka ndị nwe azụmaahịa na-achọsi ike oge na ndị ọkachamara nwere nnukwu ọchịchọ chọrọ inweta ikike ọhụụ na ịnọrọ asọmpi na ụwa dijitalụ na-agbanwe agbanwe taa. A na-agwọta nkuzi nke Primer ma mepụta ya site na obere otu na Google. Google soro ndi okacha amara n’ulo oru ka ha weta ndi oru anyi okwu ohuru, nkiti, uzo na nkuzi.
Chọọ na Primer maka nkà ị chọrọ, soro ọganihu gị ka ị na-aga, ma mụta ha niile. Isi edemede gụnyere:
Njikwa ụlọ ọrụ - Chọpụta ụzọ iji wulite mmekọrịta mmekọrịta dị mma na ụlọ ọrụ gị.
Analytics - Were mmụta na ọnụọgụ dijitalụ, nchịkọta Google, na ndị ọzọ.
Ihe owuwu - Chọpụta otu esi ahọrọ aha azụmaahịa siri ike, mepee akara njirimara gị, na ndị ọzọ.
Nghọta azụmahịa - Mara ndị na-ege gị ntị ihe mmụta banyere nnwale onye ọrụ, nyocha, na nghọta ndị ahịa.
Njikwa azụmahịa - Were nkuzi banyere iduzi, nhazi ndụ-ọrụ, ị nweta otu ndị ọzọ, na ndị ọzọ.
Atụmatụ azụmahịa - Mụta otu esi amalite azụmahịa ma setịpụ ya maka ọganiihu.
content Marketing - Nweta nkuzi banyere ịhazi, ịmepụta, na ịkekọrịta ọdịnaya na-akpali akpali.
Nbanye ndị ahịa - Mụta otu esi emepụta akụkọ azụmahịa gị ma chọta ndị na-ege gị ntị.
Digital Marketing - Chọpụta otu esi azụ ahịa gị n'ịntanetị.
email Marketing - Chọpụta otu esi ewu listi email, jiri email akpaaka, zere nzacha spam, na ndị ọzọ.
Mobile Marketing - Nweta ndụmọdụ maka itinye ndị na-ege gị ntị n’igwe ha.
n'ire - Bulie ụfọdụ ndụmọdụ na ịre ahịa mbụ gị ma ọ bụ ịrekwuo ahịa.
Social Media - Mụọ otu esi emepụta mgbasa ozi mmekọrịta, soro ndị na - eme ihe ike rụọ ọrụ, na ndị ọzọ.
Mmalite - Mụta maka ịtinye ihe na-eto eto, ịkọ mpịakọta, ịba ụba mmadụ, yana usoro mmalite ndị ọzọ.
Ahụmahụ onye ọrụ - Mụta maka inyere ndị ọrụ aka ị nweta ọtụtụ uru na weebụsaịtị gị, ụlọ ahịa mkpanaka, ngwa na ndị ọzọ.
Marketing Video - Mụta maka ịmepụta vidiyo dị n'ịntanetị, mgbasa ozi vidiyo siri ike, na ndị ọzọ.
Weebụsaịtị - Nweta ndụmọdụ na ịmepụta websaịtị azụmaahịa nke na-amasị ndị ahịa.
Bido taa! Ma ị bụrụ onye ọhụụ maka azụmaahịa ma ọ bụ azụmaahịa nwere ahụmahụ, ngwa ahụ na-enye ndụmọdụ na ntụzịaka dị egwu.
Budata Google Primer
Tags: gị n'ụlọnganjikwa ụlọ ọrụọzụzụ ụlọ ọrụAnalyticsọzụzụ nchịkọtaụlọ ikanghọta azụmahịanjikwa azụmahịaatụmatụ azụmahịaọzụzụ azụmahịacontent Marketingọzụzụ ahia ọdịnayaọzụzụ ọdịnayaaka ndi ahiandị ahịa ọzụzụ ọzụzụdigital marketingọzụzụ ịzụ ahịa dijitalụEducationemail Marketingemail ahia ọzụzụmmụtamobile ngwaahịa efuọzụzụ ịzụ ahịa mkpanakaNkwado ire ahịaọzụzụ ahịan'ireSocial Media Marketingọzụzụ mgbasa ozi mgbasa oziọzụzụ mgbasa ozi mmekọrịtamalitestartupsjiri ọzụzụ ọzụzụahụmahụ onye ọrụahịa vidiyoọzụzụ ahia vidiyoọzụzụ videowebsiteọzụzụ webụsaịtị